Unoona sei Jesu—saMambo ane simba here kana kuti sekasvava zvako kanoda kutarisirwa?
JESU paakakura ndokuzoziva nzira iyo akanga adzivirirwa nayo achiri muduku, unofunga kuti akanyengetera kuna Jehovha akamutenda here?— Unofunga kuti Jesu angave akazoudzei Mariya naJosefa paakaziva kuti vakanga vaponesa upenyu hwake nokuenda naye kuIjipiti?—
Chokwadi, Jesu haasisiri mwana. Haasisiri kunyange kugara panyika sezvaakamboita. Asi wakaona here kuti mazuva ano vamwe vanhu vanenge vanofunga nezvaJesu sorusvava ruri muchidyiro chezvipfuwo?— Izvi zvinoitika panguva yeKrisimasi apo munzvimbo dzakawanda mifananidzo yaJesu ari kasvava inoonekwa.
Kunyange zvazvo Jesu asisiri kugara pasi pano, unodavira kuti mupenyu here?— Hungu, akamutswa kubva kuvakafa, uye iye zvino ava Mambo ane simba mudenga. Unofunga kuti chii chaanogona kuita kudzivirira vanomushumira?— Jesu paakanga ari pasi pano, akaratidza kuti aigona kudzivirira sei vaimuda. Ngatione kuti akazviita sei rimwe zuva apo akanga aenda neigwa nevadzidzi vake.
Zuva rava kunovira. Jesu ave achidzidzisa zuva rose pedyo neGungwa reGarireya, iro riri dhamu guru rakareba anenge makiromita 20 uye makiromita anenge 12 kufara. Zvino anoti kuvadzidzi vake: “Ngatiyambukirei mhiri kwegungwa.” Saka vanopinda muigwa vonanga mhiri kwegungwa racho. Jesu aneta zvikuru, saka anoenda kumashure kweigwa racho orara pamutsago. Pasina nguva refu afa nehope.
Jesu ari kuti chii kumhempo nemafungu?
Vadzidzi vacho vanoramba vakamuka kuti vadzore igwa. Zvinhu zvose zviri kufamba zvakanaka kwechinguva, asi zvino mhepo ine simba inotanga. Inoramba ichiwedzera kuvhuvhuta zvine simba, uye mafungu acho anoramba achikura. Mafungu acho anotanga kupinda muigwa, uye igwa rinotanga kuzara mvura.
Vadzidzi vanotya kuti vachanyura. Asi Jesu haatyi. Achakarara kumashure kweigwa. Pakupedzisira, vadzidzi vanomumutsa, vachiti: ‘Mudzidzisi, Mudzidzisi, tiponesei; tava kufira mudutu rino.’ Ipapo Jesu anomuka otaura nemhepo nemafungu. Anoti: “Shi-i! Nyarara!”
Pakarepo mhepo yacho inomira kuvhuvhuta, uye gungwa racho rinodzikama. Vadzidzi vanoshamiswa. Havasati vamboona chinhu chakadai. Vanotanga kutaurirana vachiti: “Iyeyu anombova ani, nokuti anotorayira mhepo nemvura, uye zvinomuteerera?”—Ruka 8:22-25; Mako 4:35-41.
Unoziva kuti Jesu ndiani here?— Unoziva here kuti anowanepi simba rake guru?— Vadzidzi vaisafanira kutya Jesu paaiva navo, nokuti Jesu akanga asiri munhuwo zvake. Aigona kuita zvinhu zvinoshamisa izvo zvisina mumwe aigona kuzviita. Rega ndikuudze nezvechimwe chinhu chaakamboita pagungwa raiva nedutu.
Rimwewo zuva ava manheru, Jesu anoudza vadzidzi vake kuti vakwire igwa vafanoenda mhiri kwegungwa. Zvino Jesu anokwira mugomo ari oga. Inzvimbo yakanyarara yaanogona kunyengetera kuna Baba vake Jehovha Mwari.
Vadzidzi vanopinda muigwa votanga kufamba vachiyambuka gungwa. Asi pakarepo mhepo inotanga kuvhuvhuta. Inoramba ichiwedzera kuvhuvhuta zvakasimba. Zvino hwava usiku. Varume vacho vanobvisa seiri votanga kukwasva. Asi havasi kufamba nokuti mhepo ine simba iri kuenda kwavari kubva. Igwa racho riri kuti rikaenda rodzoka mumafungu acho makuru, uye mvura iri kupinda mukati. Varume ava vanoshanda nesimba kuti vaedze kusvika kumahombekombe, asi havagoni.
Jesu achiri oga mugomo. Ave arimo kwenguva yakareba. Asi iye zvino anogona kuona kuti vadzidzi vake vave mungozi nemafungu makuru. Naizvozvo anoburuka mugomo achienda kumucheto kwegungwa. Jesu anoda kubatsira vadzidzi vake, naizvozvo anotanga kufamba achienda kwavari nepamusoro pegungwa rine dutu!
Chii chinoitika kana ukaedza kufamba pamusoro pemvura?— Unonyura, uye unogona kufira mumvura. Asi Jesu akasiyana. Ane simba chairo. Jesu paari kuda kufamba kuti anosvika kuigwa pakareba. Naizvozvo kwava kuda kutoedza vadzidzi pavanoona Jesu achiuya kwavari ari pamusoro pemvura. Asi havagoni kudavira zvavanoona. Vanotya zvikuru, uye vanodanidzira nokutya. Zvino Jesu anotaura navo achiti: “Shingai, ndini; musatya.”
Nei Jesu akaita zvishamiso?
Jesu paanongopinda muigwa racho, dutu racho rinomira. Vadzidzi vanoshamiswa zvekare. Vanowira pasi pamberi paJesu vachiti: “Chaizvoizvo imi muri Mwanakomana waMwari.”—Mateu 14:22-33; Johani 6:16-21.
Zvaisazofadza here kurarama kare ikako uye kuona Jesu achiita zvinhu zvakadaro?— Unoziva here kuti nei Jesu akaita zvinhu izvozvo zvinoshamisa?— Akaita zvinhu izvozvo nokuti aida vadzidzi vake uye aida kuvabatsira. Asi akaitawo zvinhu izvozvo kuratidza simba guru raaiva naro uye raaizoshandisa munguva yemberi soMutongi woUmambo hwaMwari.
Jesu anodzivirira sei vateveri vake mazuva ano?
Kunyange nhasi Jesu anoshandisa simba rake kakawanda kudzivirira vateveri vake pakuedza kwaSatani kuvamisa kutaurira vamwe nezvoUmambo hwaMwari. Asi Jesu haashandisi simba rake kudzivirira vadzidzi vake kuti vasarwara kana kuti kuvaporesa pavanenge vachirwara. Kunyange vaapostora vaJesu vose pakupedzisira vakafa. Jakobho mukoma waJohani akapondwa, uye Johani pachake akaiswa mujeri.—Mabasa 12:2; Zvakazarurwa 1:9.
Zvakafananawo nhasi. Vanhu vangave vachishumira Jehovha kana kuti kwete, vose vanogona kurwara nokufa. Asi nokukurumidza, mukutonga kwaJesu saMambo wehurumende yaMwari, zvinhu zvichave zvakasiyana. Panguva iyoyo hapana munhu achafanira kutya nokuti Jesu achashandisa simba rake kukomborera vose vanomuteerera.—Isaya 9:6, 7.
Mamwe magwaro anoratidza simba guru raJesu, uyo Mwari anoita Mutongi muUmambo hwake, ndiDhanieri 7:13, 14; Mateu 28:18; naVaEfeso 1:20-22.